Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Russia na San Marino na -arụ ọrụ na njem njem visa efu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Akụkọ San Marino • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Dị ka onye ozi mba ofesi Russia Lavrov si kwuo, Russia nwere olile anya na ozugbo ịdị ọcha na ọnọdụ ọrịa na -agbasa, akụkụ ndị ahụ “ga -eme ka mgbanwe ndị njem, nke na -ewu ewu.”
Russia na San Marino na-arụ ọrụ na njem njem na-enweghị visa.
A ga-abịanye aka na nkwekọrịta njem visa na Russia-San Marino n'oge adịghị anya.
Njem nlegharị anya n'etiti San Marino na Russia bụ ihe ama ama, ka Minista Lavrov siri kwuo.
Mịnịsta mba ofesi Russia Sergey Lavrov kwupụtara taa mgbe ya na onye ode akwụkwọ nke San Marino na-eleta Luca Beccari na-eleta, na nkwekọrịta gbasara usoro njem njem na-enweghị visa n'etiti mba abụọ a ga-agwụcha nke na a ga-akwado ya n'ihu ọha n'ọdịnihu kacha nso.
Onye ozi mba ofesi Russia Sergey Lavrov na onye odeakwụkwọ nke San Marino maka ozi mba ofesi, Luca Beccari
“Anyị nwere nkwekọrịta n'ụkpụrụ iji mee ka ọrụ ngwa ngwa na nkwekọrịta gọọmentị etiti na njem enweghị visa maka ụmụ amaala mba abụọ a. Nkwekọrịta a adịla njikere, echere m na anyị ga -ahazi mbinye aka ya n'oge na -adịghị anya, ”Minista mba ofesi Russia kwuru.
Dabere na Russian Mịnịsta Ofesi Lavrov, Russia nwere olile anya na ozugbo ọnọdụ ịdị ọcha na ọrịa ọrịa na -aga n'ihu, akụkụ ndị ahụ 'ga -eme ka mgbanwe ndị njem, nke na -ewu ewu.'
San Marino bụ microstate ugwu ugwu nke ugwu-etiti Italy gbara ya gburugburu. N'etiti mba ndị kacha ochie n'ụwa, ọ na -ejigide ọtụtụ ihe owuwu ụlọ ya mere eme. N'ugwu mkpọda nke Monte Titano na -anọdụ isi obodo, a na -akpọkwa San Marino, nke amaara maka obodo ochie gbara mgbidi gburugburu na okporo ụzọ okwute wara wara. Ụlọ elu atọ ahụ, nnukwu ụlọ elu nke dị na narị afọ nke 11, nọ n'elu elu agbata obi Titano.
San Marino abụghị onye otu European Union ma ọ bụ Mpaghara Akụ na ụba Europe. Agbanyeghị, ọ na -ejigide oke ókè ya na Italytali. Ebe ọ bụ na enwere ike ịnweta San Marino site na Italy Ntinye agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ebu ụzọ banye na Mpaghara Schengen, yabụ na iwu visa Schengen na -emetụta eziokwu. Ndị ọbịa si mba ọzọ nọrọ ihe karịrị ụbọchị iri na San Marino ga -enwerịrị ikike n'aka gọọmentị.
San Marino na-abịanye aka na nkwekọrịta nnwere onwe visa na-akwụghị ụgwọ nke bara uru maka ụmụ amaala mba ọzọ mana ọ na-emetụta ndị ji paspọtụ San Marino. San Marino esorola Argentina, Austria, Bosnia na Herzegovina, Bulgaria, China, Finland, Hungary, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Morocco, Portugal, Romania, Slovenia, na United Kingdom bịanye aka na ndị na-eji akwụkwọ ikike ngafe. .
Na mgbakwunye, ha na Azerbaijan, Gambia, Moldova, Eswatini, Tunisia, Turkey, na Uganda bịanyere aka na nkwekọrịta maka ndị ji akwụkwọ ikike ngafe.
Njem nleta na Guatemala na Cancun bịara dị mfe
Njikwa mkpofu COVID na -ezighi ezi nwere ike ịbawanye nje ...
Ndi Delta Plus di iche na Delta di iche nke ...
Versiondị ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ nke Emirates nwere ike ịpụta ...
Fraport June 2021 fficzọ okporo ụzọ: Iweghachite na ...
Ntughari njem nlegharị anya nke ụwa na njikwa nsogbu ...
Ala ọma jijiji na -ama jijiji na Alaska Peninsula
Ego ha nwetara na Hawaii na enweta onu ego na June 2021
Nnukwu ihe egwu dị egwu: Hong Kong machibidoro ndị njem niile njem ...